रेडियो ताप्लेजुङ दसैं : मिलन वा बिछोड ?
दसैं : मिलन वा बिछोड ?
असोज २८ गते । गाउँलेलाई अचानक नयाँ समस्या आइलाग्यो । अर्कै ठाउँबाट पढाउन आइपुगेका ‘शिक्षक–शिक्षिका’को एक जोडीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने भयो । गाउँमा भाडामा कोठा दिने चलन थिएन । त्यो प्रथा वा पेसा उनीहरूको संस्कृतिभन्दा भिन्न थियो । गाउँलेले पाहुनाको स्वागत गर्न र वर्षौं आतिथ्य दिन सक्थे, तर बहाल लिन सक्दैनथे ।
केही दिन वा महिनासम्म त उनीहरू आफ्नै परिवारमा ती ‘मास्टर–मास्टर्नी’लाई पाहुना मानेर राखिदिन सक्थे, तर उनीहरू कति वर्ष बस्ने हुन्, कुनै टुङ्गो थिएन । त्यसमाथि प्रत्येकका घर आफ्ना परिवारका लागि ठिक्क हुनेगरी बनेका थिए र सोही अनुसार प्रयोग भएका थिए ।
कसैको घरमा केही समय बसे पनि लामो समयसम्म बस्न मिल्ने अवस्था रहेन । यो २०३७ सालको कुरा हो । वल्लो र पल्लो गाउँका दुई फरक स्कुलमा पढाउने यो जोडीलाई गाउँलेले आफ्नै हिसाबले ‘गुरुआमा’ र ‘गुरुबा’ नाम राखिदिए, आफ्नै गोठको माथिल्लो भागमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए र उनीहरूका दुई ‘मिजा’लाई आफ्नै छोराछोरी जस्तै माया दिए, अपनाए र हुर्काए ।
अभिभावक देवीबहादुर र परिवारको विशेष पहलमा भैंसीगोठको माथिल्लो घाँस राख्ने भाग लिपपोत भयो । केही सामान्य सुरक्षाका प्रबन्ध गरियो । खाना पकाउँदा आगोले खरको छानो सल्किन्छ भनेर चुल्होको ठिक माथि बाँस र माटोले छापेको सानो भाग निकालियो । गोठको आधा भाग बारियो र ढोकाको प्रबन्ध गरियो । ‘मिजाहरू’ साना हुँदा त चार जनाको यो परिवार बारेको भित्री भागमा नै अट्थे, तर विस्तारै यो साँघुरो भयो र चारैजना त्योभन्दा बाहिरको खुला ठाउँमा सुत्न थाले । बाउ–आमा त आफ्ना सन्तानका लागि चिन्तित नै थिए होलान्, तर जेठो ‘मिजा’ केही कुराले सदैव चिन्तित रहन्थ्यो ।
उसको प्रत्येक रात चितुवाले आफ्ना आमा–बाबु वा सानो भाइलाई खाइदिने डरमा बित्थ्यो । बेला–बेलामा गाउँलेका गोठहरूमा रहेका बाख्रा मारिएका समाचारले उसलाई अझै व्याकुल बनाउँथ्यो र आफू सुत्ने ठाउँभन्दा ठिक तल रहेको बाख्राको सट्टा आफ्नै परिवारलाई खाइदियो भने के गर्ने रु भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो । बिजुली बत्ती थिएन । टुकी वा खाना पकाउँदाको आगोले त्यो सानो घरगोठ जल्ने कल्पनाले पनि ऊ सदैव त्रसित देखिन्थ्यो ।
गाउँघरमा प्रायस्जसो हुने आगलागीको घटनाले उसलाई डराउन बल दिन्थ्यो । तैपनि ‘बहादुर’ बच्चाले आफ्नो त्यो डर २०४९ सालमा ‘बुबै, जान्छु है भनेर आँसु झार्दै’ उक्त घर नछाड्दासम्म लुकाइरह्यो । त्यो घरको ठिक माथिको बाटोबाट बेला–बेलामा लास बोकेर मलामीहरू ‘रानीघाट’ जान हिँड्थे । अचानक गाउँको एकजना चिरपरिचित व्यक्ति सदाका लागि उसले देख्न छाड्यो ।
ऊ भने दुई–चार दिनसम्म उक्त बाटोमा हिँड्न र साँझमा बाहिर निस्कन डराउँथ्यो । मलामीहरू लास बोकेर घाट पुग्ने रातमात्र होइन, त्यसपछिका २र४ रात उसको निद र रातमा लाग्ने दिसापिसाब दुवै हराउँथे । पानी कम खान्थ्यो र राति पिसाब आए पनि चापेर बिहानको उज्यालो कुरी बस्थ्यो । यस्ता अदृश्य डरहरूका माझ पनि यो ठाउँ उसका लागि विशेष थियो, आफ्नै थियो । उसले त्यहीं बोल्न सिक्यो । हिँड्न, दौड्न, लोट्न र उठ्नमात्र होइन, झगडा गर्न, बदमासी र बिठ्याइँ गर्न सिक्यो । मास्टरका ‘मिजा’ भएपछि केही फरक हुनुपर्छ र निश्चित अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि उसले यहीं सिकेको थियो । साथीहरू बनाएको थियो, ‘रगतका नाता’भन्दा परको छुट्टै संसारको माया देखेको थियो र तिनलाई माया गरेको थियो ।
तानसेन बजारले पाल्पालाई लगभग पूर्व र पश्चिम दुई खण्डमा विभाजित गर्छ । पूर्व मगर समुदायको बाहुल्य र पश्चिममा अन्य समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति । तानसेन पूर्व लागेपछि मगर भाषा जति सहज लाग्छ, पश्चिममा भने मगर समुदाय नै पनि मगर भाषा बोलेको निकै कम सुन्न पाइन्छ । ठिक यही परिवेशमा तानसेनसँग जोडिएका ३ गाविस मदनपोखरा ९दक्षिणपूर्व० र बौघा पोखराथोक तथा बौघा गुम्हा ९पश्चिम० सँग उक्त बालकको नजिकैको साइनो रह्यो ।
तानसेन बजारबाट करिब ८ किलोमिटर दूरीमा रहेका यी तीन गाउँमध्ये बौघा गुम्हा र बौघा पोखराथोकका भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा अन्य गतिविधिमा धेरै समानता थिए । नेपालका धेरै गाउँमा जस्तै केही वडा र बस्ती छोडेर पानी र पढाइका लागि दैनिक १र२ घन्टा समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता थियो । साक्षरता वा सरकारी जागिरमा कम पहुँच हुनुको एउटा प्रमाण त सो समयमा उक्त दुई गाविसका स्कुलहरूमा कम्तीमा ७ जना शिक्षकरशिक्षिका मदनपोखरा गाविसका मात्र हुनु पनि हो ।
उता मदनपोखरा भने उसको जन्मघर थियो । ऊ जन्मेको तर धेरै कुरा नजानेको, नबुझेको । उसले आफ्नो जन्मघर र गाउँका बारेमा बुझेका वा सुनेका ४ वटा कुरा विशेष थिए । कम्युनिष्ट गाउँ, कृषिका लागि नाम चलेको, धेरै स्कुल र पढेका मान्छे भएको र सबै घरमा ‘ट्वाइलेट’ भएको अर्थात् आजको नारा अनुरूपको ‘खुला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र’ । नाताले आफ्नै जन्मघर र गाउँ भए पनि उसले मदनपोखराका विषयमा धेरै सम्झन्न, जति बौघा पोखराथोक वा गुम्हाका विषयमा । उसले बाल्यकालका घटना जति सम्झन खोजे पनि ती ठोक्किएर पश्चिम पाल्पामै पुग्थे । सायद उसको बाल्यकाल यहीं सुरु र अन्त्य भयो ।
मौसम विस्तारै फेरिन्थ्यो । जताततै रमाइलो र घमाइलो हुन्थ्यो । जाडो हल्का चियाउन खोज्थ्यो । पारि हेर्दा लहरै धौलागिरि, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमशृंखलाहरू देखापर्थे । बाटोघाटो चौडा पारिन्थ्यो, सफा हुन्थ्यो । घरहरू रातो माटो र कमेरो माटोले लिप्न सुरु हुन्थ्यो । हेर्दाहेर्दै धेरै घरको रूपरङ्ग फेरिन्थे, उज्यालिन्थे । बजार आउने–जाने क्रम बाक्लो हुन्थ्यो । तर सबैतिर सबै कुरा विस्तारै सुस्त भए जस्तै । खेतबारी, स्कुल, कार्यालय वा सबैतिरबाट मान्छेहरू विस्तारै फुर्सदिला भए जस्ता, थकै मारे जस्ता ।
सबै एउटा खास काम फत्ते गर्ने ध्याउन्नमै लागे जस्ता । खर काटिन्थ्यो, बाटिन्थ्यो र गाउँको बीच भागतिर पर्नेगरी कुनै रूखमा पिङ हालिन्थ्यो । कहिलेकाहीं चर्केपिङ नदेखिने होइन, तर यो धेरैजसो पूर्णिमाको मेलामा देखापथ्र्यो । ‘सराये’ नाच हुन्थ्यो, वल्लो–पल्लो गाउँबाट मान्छेहरू जम्मा हुन्थे, रैथाने खानाका फरक–फरक स्टलहरू राखिन्थे, केटाकेटी लोभ्याउने खेल हुन्थे । साथीहरूले यस मेलामा जाने तयारी गर्थे, आफ्ना योजना सुनाउँथे । लामो समय नदेखिएका युवाहरू घरगाउँमा देखापर्थे । बजारका ‘स्कुल’ पढ्न गएका उही उमेर समूहका साथीहरू पनि अचानक देखापर्थे ।
गाउँमा खेल्न र देख्न नपाइने नयाँ खेलाउने कुरा ल्याउँथे । सबैलाई आफ्नैपछि दौडाउँथे । कहिलेकाहीं पल्लो गाउँमा गएर फुटबल वा भलिबल खेल्थे, अनि हारिसकेपछि अलि टाढा पुगेर ‘झ्याल्ली गरेर जित्यो’ भन्दै चिच्याउँथे । साँच्चै रमाइलो माहोल बनिरहेका बेला, सबैसँग भेटघाट भइरहेका बेला, दसैं र त्यसपछिको मेलामा जाने योजना बनिरहेका बेला उसलाई भने टीका लगाउन आफ्नो मूलघर जानुपर्ने हुन्थ्यो । उसले यी सबै रमझम छाडेर ‘नयाँ ठाउँ’मा रमाउनुपर्ने हुन्थ्यो । दसैं ‘मिलन वा भेटघाट’को चाड भनिरहँदा ऊजस्तै कैयौं मिजाहरूका निम्ति दसैं ‘विछोड’को चाड पो थियो कि रु तर दसैंको सङ्कथनले दसैंलाई ‘विछोड’को चाड भन्न दिंँदैन, छुट्टिने पर्वका रूपमा चित्रित गर्दैन । साँच्चै दसैं ‘मिलन’को चाड थियो कि ‘विछोड’को यति धेरै वर्षपछि खोजिएको यो प्रश्नको उत्तर ऊसँग थिएन र छैन पनि ।
जन्म बाहेक बाल्यकालका लगभग सबै कुराको सुरु र अन्त्य बौघामै भए पनि उसको ‘दसैं’ भने मदनपोखरा ९जन्मघर० सँग मात्र जोडिन्छ । जब उसले आफ्नै जीवनका दसैंहरू सम्झन खोज्छ, केही लेख्न खोज्छ, उसले आफै हुर्केको, खेलेको, पढेको र सबैभन्दा धेरै यादहरू सँगालेको बौघामा ‘दसैं’ भेट्न सक्तैन, सम्झन सक्दैन र लेख्न सक्दैन । खासगरी दसैंका लागिमात्र पुग्ने मूलघर र जन्मथलोमा उसलाई माया गर्ने हजुरबा, हजुरआमा, अन्य बुबा र आमाहरू अनि थुप्रै नातेदार थिए । दसैं नै बहाना थियो, अवसर थियो, जसमा सबै नातेदारसँग भेट हुन्थ्यो ।
त्यसैले यो रमाइलो थियो र विशेष थियो । सायद वर्षमा एकपटक दसैंको लागि पुग्ने जन्मघर र मावली घरको दसैं बाहेक अन्य दसैं उसले कहिल्यै देखेन । अन्यत्र अन्यसँग कहिल्यै दसैं मनाएन । त्यस्तो किन भयो वा किन गरियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर त्यसको उत्तर सामान्यतस् खोजिँंदैन वा खोज्ने प्रयास गरिँंदैन । किनभने दसैंलाई ‘आफन्त र मान्यजन’हरूको आशिर्वाद लिने चाडका रूपमा परिभाषित र सीमित गरिएको छ । के ‘दसैं’ बाहेक सबैथोक मनाइने कुनै ठाउँमा ‘दसैं’ पनि मनाउन सकिँंदैन रु किन दसैंमा ‘मिलन’को लागि भागाभाग हुँदै गर्दा ‘विछोड’ पनि हुने गर्छ रु किन दसैं स्वतस् नातेदारहरूसँग मात्र जोडिन पुग्छ रु किन एउटा ‘मिजा’ले एउटा गाउँमा फागु मनाएको, तीज देखेको, अन्य साना–ठूला सबै जात्रा, पर्व, विवाह, जन्म, मृत्युका दुस्खसुखमा सामेल भएको सबै सबै कुरा सम्झन सक्छ, लेख्न सक्छ, तर ‘दसैं’ लेख्न सक्दैन । सम्झनै सक्दैन ।
मावली हजुरआमा, घरकी हजुरआमा र त्यसै गाउँकी बुबै वा बज्यैमा के फरक थियो रु किन र कसरी त्यो बच्चाले ती सबै आदरणीयहरूका माझ फरक छुट्याउन सिक्यो रु टीका थाप्ने र नथाप्ने, दसैं कोसँग, किन र कसरी मनाउने भन्ने कुरा उसको दिमागमा आयो कि आएन होला रु चौरासी पूजा गरिसकेका आदरणीयहरूसँग आशिर्वाद लिनुपर्छ भनेर नाता नपर्नेहरूको हातको टीका लगाएर आशिर्वाद लिन सिकाएका अभिभावकले कुनै एक वर्ष ‘जन्मघर’को सट्टा कर्मघरमा दसैं मनाउने कुरा सोचे कि सोचेनन् होला रु
१२ वर्षसम्म एउटै गाउँमा बसेको र त्यहीं हुर्किएको एउटा बच्चाले त्यो गाउँको दसैं देखेन, तर थुप्रै अचम्मलाग्दा कुरा भने देख्यो । उसका अस्थिर यात्राले उसलाई मदनपोखरा, बौघा पोखराथोक, गुम्हा, बुटवल, तानसेन र काठमाडौं पुगेर फाल्दा पनि उसले मनाएको दसैं, उसले देखेको दसैंमा आफ्नै जन्मघर, आफ्नै नातेदार र आफन्तमात्र देखापरिरहे, परिरहन्छन् ।
त्यसैले यतिका वर्षपछि पनि उसले दसैं आफ्ना आफन्त र नातेदारसँग भेटघाट गर्ने र टीका थाप्ने पारिवारिक जमघट हो कि त्योभन्दा अलि धेरै पनि हो रु भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । त्यसो त गाउँघरको दसैंको विशेषता नै आफन्त र नातेदारमात्र होइन, समग्र गाउँलेको भेटघाट हो भन्नेमा त्यो मिजा विश्वस्त छ । तैपनि उसले त्यस्तो ‘समग्र भेटघाट’को अवसर नपाएकोले होला, उसलाई आफ्नो जन्मथलोमा टीका लगाएको, परिवार भेटेको र नातेदारसँग मात्र टीका लगाएको र रमाएको याद छ ।
दसैंभन्दा केही दिन पहिले ऊ मूलघर फर्कन्थ्यो । त्यहाँ पनि बाटो खनिन्थ्यो, फराक र सफा बनाइन्थ्यो । जताततै चहलपहल र छुट्टै रौनक हुन्थ्यो । नयाँ अनुहार भेट्थ्यो, कतिलाई ढोग्थ्यो, कतिसँग पहिलोपटक चिनजान हुन्थ्यो । विस्तारै महोत्सव सकिन्थ्यो र छुट्टिने क्रम चल्थ्यो । प्रत्येक वर्ष दसैं आउँथ्यो, जान्थ्यो । तर दसैं मनाएर पुनस् फर्कंदा उसलाई थुप्रै कुरा नयाँजस्ता लाग्थे, फरक लाग्थे । दसैं अगाडिका सफा बाटाहरूमा विस्तारै फोहोर भेटिन्थे ।
बाटोमा सेलाइएका प्रसाद, फलफूल, जमरा र अन्य सामग्रीहरू छरिएका देखिन्थे । साथीहरूले नयाँ–नयाँ कुरा गरिरहेका हुन्थे । उनीहरू एकआपसमा बोलेको कुरा, कुनै कुरा सम्झिएर हाँसेको कुरा, नयाँ–नयाँ कुरा देखेको, खेलेको र खाएको कुरा वा मेलामा बिठ्याइँ र रमाइलो गरेको कुरामा उसले आफूलाई कतै भेट्दैनथ्यो । ऊ ती पुराना साथीहरूको माझमा कतै हुँदैनथ्यो । अचानक ऊ आफ्नै साथीहरूबाट हराउँथ्यो, छुट्टिन्थ्यो । के दसैं अगाडि र पछाडि साथीहरू फेरिए रु के त्यो पुरानो ठाउँ नै फेरियो रु उसलाई आफ्नै पुराना साथीहरू पुरानै रूपमा भेट्न केही समय लाग्छ । आफ्नै ठाउँमा पुनस् मिसिन र भिज्न केही दिन लाग्छ, दसैं अगाडि छाडेको घर सफा गर्न र सबै कुरा जस्ताको तस्तै बनाउन उसका आमाबालाई केही समय लागे जस्तै ।
करिब ३७ वर्षको उमेरसम्म पनि उसले उसका सबै नातेदारसँग टीका लगाउन गाउँ घुमेको एकपटक मात्र हो भन्ने कुरा बिर्सेको छैन । सायद त्यो वर्ष नै उसले राम्रोसँग सम्झिएको र मनाएको अन्तिम दसैं थियो, जहाँ दलानमा टीका थाप्न आउनेहरूको भिड थियो र ऊ पुरा गाउँ डुलेको थियो । त्यसपछिको दसैंमा घर र गाउँकै ‘मूल’ हजुरबुबा रहनुभएन । अर्को दसैंसम्ममा त्यो दलानको जमघट रहेन, अब त्यो घरमा हुर्के–बढेका सबै आआफ्नो बाटो लागिसके ।
त्यसैले अब नत दलान बाँकी छ, न घर अनि न कुनै चहलपहल । घर खण्डहर बनिसकेको छ । रमाइलोसँग मनाएको पहिलो र अन्तिम एउटा दसैंको सम्झना सोही घरसँग विस्तारै ढल्दैछ, बिलाउँदैछ । अब करिब २० घरधुरी रहेको त्यो गाउँ लगभग खाली छ, सुनसान छ । सबै छरिएका छन् । धेरैजसो थातथलो छाडेर फरक–फरक ठाउँमा पुगेका छन् र ‘प्रगति, उन्नति’ गरिरहेका छन् ।
तर यसको विपरीत कहिल्यै दसैं नमनाएको र भावनात्मक सम्बन्ध रहेको गाउँ र घर भने अहिले पनि लगभग उस्तै देखिन्छ । अनि घरका आमाबा र दाजुभाइहरू त्यसैगरी सोही ठाउँमा बसिरहेका छन् । दसैं मनाइरहेका छन् । के काठमाडौं पलायन भइसकेको ती ‘मिजा’ले रगतको नाता नलाग्ने नातेदारहरूसँग दसैं मनाउन सक्ला रु के उसले जीवनचक्र जस्तै घुम्ने यो सांस्कृतिक मेला र परम्पराको उत्पादन–पुनरुत्पादन प्रक्रियाबारे आफ्नै मिजालाई ‘मिलन र विछोड’का कथा र मान्यता फरक–फरक हुनसक्छन् भनी बुझाउन सक्लान् ? अब उसका आफ्नै सन्तान कुन ठाउँको दसैंमा रमाउलान्, अनि कुन ठाउँको दसैं सम्झनामा राखी हिँड्लान् ? लेखक दिपक अर्याल । ई कान्तिपुर